Bandhigga Buugga “Aqoon Baa Aroostay Qabyaalad” – Hargeysa Cultural Centre
Bandhigga Buugga "Aqoon Baa Aroostay Qabyaalad"
Start	: 2019/04/18 19:00
End	: 2019/04/18 21:00
Abwaan Maxamed Aw Cismaan Maxabe “Maxamed-Dheere” kolkii uu dhammaystay dugsigii sare ee Faarax Oomaar, waxa uu ku soo baxay barmaamijkii Heesaha Hirgalay oo lagu qabtay Beerta Xorriyadda, Hargeysa, 1975, isla markiibana ku biirey kooxdii Janaraal Daa’uud ee Xoogga Dalka, isagoo horeba uga tirsanaa ciidammada. Riwaayadihii uu ka qayb galay ee jilaaga iyo heesaaga ka ahaa waxa ugu horreysay “Nin Qasbaaya Jacayl Ma Loo Quudhi Karaa?” Waxa kale oo uu jilay “Farxadi Waa Naxdin,” “Waalidkii Ubadkiisa La Wadaagay Jacaylka,” “Wed Jacayl Ma Yaqaan,” “Warmo Caashaq” iyo kuwa kale oo xilligaas ahaa. Muddadii Somaliland dib u soo noqotay waxa uu allifey riwaayado iyo maansooyin
dalka ku hagaya wadanoolaanshaha, dib-u-dhiska iyo kasookabashada xanuunkii dagaallada. Waxa ka mid ahaa majaajilladii “Sharkii Khayr Baa Beddelay” iyo “Adduunyoy Shaadirey,” “Xidhmadii Ubaxa Xabiibi Gudddon,” iyo “Waa La Doogiye Yaan La Dacaroon.”
Buuggiisan “Aqoon Baa Aroostay Qabyaalad” waxa ku jira maansooyin, majaajillooyin iyo curin kale oo ummadda u sheegaysa sida aanay qabyaaladda iyo qarandhisku isu qaban karin, halistuna ay tahay kolka aqoonyahankeedu ka kori waayo qabyaaladda.